ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်ဆိုသူ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်ဆိုသူ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများ
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံဘက်က ခိုးဝင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှာ အခြေချနေထိုင်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ အုပ်စုဖွဲ့ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် မှုကြီး တရပ် ဇွန်းလ (၃)ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းမှာ တောင်ကုတ်မြို့ ပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခံရသူမျာသည် မြန်မာမူစလင်အများစုဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ဒီသတင်းကို ကြားကြားချင် တကယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်း မိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဆုတောင်းတာ နောက်ကျသွားပြီး လူယုတ်မာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင် စစ်သွေးကြွတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အတွက်ကျနော်တို့ ခံစားနေရသလိုမူစလင်တွေ လည်း သေဆုံးသူ မူစလင်တွေအတွက်ခံစားနေရမယ်ဆိုတာကျနော်တို့နာလည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူအားလုံး မူစလင်လူထုနဲ့ အတူ ထက်တူထက်မျှခံစားရပါကြောင်း သတင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
စစ်တွေ့မြို့ ပေါ်က ရဲစခန်းတစ်ခုကိုလည်း စစ်သွေးကြွ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားများက ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး လက်နတ်တိုက်ဖေါက်၍ လက်နတ်များ ရယူရန်အထိ ကြံစည်လာသည့်အတွက် လုံခြုံရေး ရဲဝန်ထမ်းများ၏ ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့် လူစုခွဲခဲ့ရသည်ဟုသိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုလို မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဆိုးသွမ်း သောင်းကျန်နေတဲ့ ဒီဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသားစစ်သွေးကြွ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင် အကြမ်းသမားများကို နိုင်ငံတော်အဆင့် စစ်ဆင်ရေးဖြင့်
ချေမှုန်းရန်လိုအပ်လာပြီဆိုတာ အချိန်အခါက သက်သေပြနေပါပြီး။ ဒီ စစ်သွေးကြွ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ စစ်လိုလားတဲ့ အပြုအမှုတွေကြောင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားနိုင်ငံများက အကြမ်းဖက်သမားများဟု ရှုမြင်လာနေပါပြီး။
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ကျူးလွန်ခဲ့သူ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင် စစ်သွေးကြွတို့၏ အပြုအမှုများသည် နိုင်ငံတော်၏ တရားရေး မဏ္ဍိုင်ကို မထီမဲ့မြင်လုပ်ရာရောက်သလို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလည်း စော်ကားရာရောက်ပါသည်။ တနိုင်ငံလုံးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာပြည်သူများကို အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ် တံဆိပ်တပ်ပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ လူမဆန်တဲ့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင် တစ်စုအတွက်ကြောင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများသည် လူသတ်သမားများအဖြစ် ကမ္ဘာ အလယ်တွင် အရှက်ရစေခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျဘက်က ခိုးဝင်လာသူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်ဆိုသူများက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လုယူပြီး သီးခြားနိုင်ငံ ထူထောင်ရန်က အပအခြားဘာမှ သူတို့ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ ပြသလိုက်ခြင်း လည်းဖြစ်သည်။ ဒီစစ်သွေးကြွ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင် အကြမ်းဖက်သမားများလက်ထဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ကျမသွားခင် တစ်ခုခုတော့လုပ်သင့်ပြီ တရားဥပဒေကို မလေးစားသူ မလိုက်နာသူ စစ်သွးကြွ နေသူ အကြမ်းဖက်လိုလားသူ လူမိုက်များကို ဆုံးမဖို့ အချိန်ကျရောက်နေပါပြီး။
မြန်မာနိုင်ငံသား မူစလင်များနဲ့အတူ ကျနော်တို့ မြန်မာလူထု တရပ်လုံး ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း ပြောလိုပါသည်။ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျနိုင်ငံသား ရခိုင် တစ်စုရဲ့  အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ သည် မြန်မာလူထု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနဲ့ လားလားမျှမသက်ဆိုင်ကြောင်း မြန်မာမူစလင်များနာလည် သဘောပေါက်စေချင်ပါသည်။
This entry was posted on January 15, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသား ဘင်္ဂလာရခိုင်များ မြန်မာနိုင်ငံထဲ စိမ့်ဝင်လာနေခြင်းအား တားဆီး ကန့်ကွက်ရန် သင့်မှာလည်း တာဝန်ရှိသည်။
အရှုံးကနေ အနိုင်ပြန်ရနိုင်ပါသည်။သို့ သော်အရှုံးမပေးရန်နှင့်မရပ်တန့် ရန်သာအဓိက ကျပါသည်။ … →